Global Voices teny Malagasy » Ny Antony Mahatonga Ny Herisetra Any Andrefan’i Myanmar. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jona 2012 3:50 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tantara, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Lohatenin-dahatsoratra an-gazety i Myanmar tato ho ato noho ireto antony roa ireto : ny fitsidihana manan-tantara nataon'ilay nahazo ny loka Nobel ho an'ny Fandriam-pahalemana Aung San Suu Kyi tany Eoropa sy ny herisetra  mianjady any Rakhine fanjakana iray ao andrefan'ity firenena ity .
Manahirana ny manilika ho aminà vondrona iray manokana ny andraikitra amin'ny korontana , vono olona, fandoroana trano izay efa niha-nahazo vahana tato anatin'ity fanjakana ity roa herinandro lasa izay, nefa mazava be fa ireo niharam-boina  dia ny olon-tsotra avy amin'ny Arkanais, foko be olona ato amin'ity fanjakana ity sy ireo Rohingyas izay mitady ny hankatoavan'ny firenena azy ho foko.
Araka ny tatitra nataon'ny governemanta dia miisa 2.528 ny trano may hatramin'ny nanombohan'ny fifandonana . 1.192 an'ny Arakanais ary 1.336 kosa ny an'ny Rohingyas. Io tatitra io ihany koa no nilaza fa 29 ny olona maty  tamin'ny fifandonana — 13 Arakanais ary 16 Rohingyas.
An'arivony ny olona nandositra  noho ny fisian'ny herisetra faobe. Misy toby 37 hatreto mandray ireo niharam-boina miisa 31.884 .
Voasoratry ny ankamaroan'ny gazety matetika fa ny Rohingyas no ‘vondron'olona vitsy an'isa tena iharan'ny fanenjehana mafy any Azia.’ Saingy mizarazara be kosa ny fomba fijerin'ny olona  any Myanmar. Raha ny marina , tsy mankato ny Rohingyas ho isan'ny foko ao anatin'ny firenena ny governemanta.
Aung Zaw , tonian-dahatsoratry ny gazety boky the Irrawaddy dia maneho ny fanakianan'ny olona ny Rohingyas
Silamo ny ankamaroan'ny Rohingyas, izay no mahatonga ny fanontanian'ireo olona maro ivelan'i Myanmar raha toa ka fanenjehana fivavahana io miseho io. Etsy andanin'izany, ireo antokom-pivavahana maro any Myanmar dia nandà fa tsy olana ara-pinoana . Namoaka ity fanambarana ity izy ireo andro vitsy lasa izay
May Thingyan Hein  dia manoratra momba ireo karazana disadisa samihafa mahakasika ireo korontana any Rakhine.
Kianin'i Kyaw Zwa Moe  mafy ny haino aman-jery sosialy noho ny fitsofany ny afon'ny kabarim-pankahalana sy fanavakavahana ataony
Soa ihany fa misy feo tony  ney anivon'ny aterineto izay miantso fatratra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny firaisana. Dave Gilbert sy Violet Cho dia nanaparitaka ny sasany tamin'ireo sary tao amin'ny Facebook mampiseho ny filaminana ao amin'ny firenena.
Mitebiteby ny Peace Warriors  noho ny fandrahonana mahazo ny Silamo ao iarngon renivohitr'i Myanmar.
Ny haino aman-jerim-panjakana New Light of Myanmar  dia nitantara ny fitsidihana nataon'ireo manampahefana avy amin'ny governemanta tany amin'ny tobin'ireo niharam-boina .
Violet Cho  dia maniry fomba fijery iray lalindalina kokoa ny zava-misy any Rakhine.
Gaga ny ankamaroan'ny mpitolona sy ny mpanao gazety ivelan'i Myanmar fa ireo mpiasam-panjakana bekotro maroholatra avy amin'ny mpanohitra 8888 Generation Student Leaders  (Andianà Mpitarika Mpianatra 8888) dia nanao fanambarana manamafy ny andàlan'ny governemanta momba ny tsy fankatoavana ny Rohingyas ho mponina ao Myanmar.
Ny sasany amin'ireo mpikatroka dia te-hahafantatra raha mitovy fijery amin'ny 8888 Generation Student Leaders i Suu Kyi izay miantso ny fampiharana ny lalàna  ho vahaolana amin'ny olana ao Rakhine .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/18/34399/
 fijerin'ny olona: http://www.youtube.com/watch?v=rHYvgnxuFuc
 olana : http://www.mmbreakingnews.com/?p=73
 haino aman-jery sy ny haino aman-jery sosialy : http://www.dvb.no/news/internet-users-unload-anger-on-social-media-sites/22433
 Kaomisiona aziatika momba ny zon'Olombelona: http://www.mizzima.com/edop/letters/7320-open-letter-to-burma-a-bangladesh-ahrc.html
 fampiharana ny lalàna: http://www.dvb.no/news/suu-kyi-%E2%80%9Cwe-need-precise-laws-on-citizenship%E2%80%9D/22447